ဘုန်းကျော်: မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွင်းမှ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲအတွင်းမှ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းကို ရက်ပေါင်း (၃၀) အကြာတွင် ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဓိက ငွေကြေးချမ်းသာသော သုံးယောက်ကို ရွေးချယ်ပေးကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ၂၀၀၉-ခုနှစ်အတွက် ငွေကြေးချမ်းသာဆုံး သူများကို ကိုဘုန်းကျော်(လူ့ဘောင်သစ်) ဘလော့ဂ်မှ ထိုက်ထိုက် တန်တန် ဂုဏ်ပြုဆုပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းကြေငြာအပ်ပါသည်။
ရေးသားသူ - phonekyaw at Tuesday, March 24, 2009
ဒီစာရင်းထဲ မပါရရင်စိတ်ဆိုးမိမယ် အားဂျီးစိတ်ဆိုးမယ်..
don't worry! I believe yours is first.
တခြားနိုင်ငံ နဲ့ဒေသက ဆရာတွေကိုလဲ ထည့်ပါဦးဗျို့..
မလေးရှားက ဆြာတွေကလဲ မဲဆောက်ကဆြာ တွေလိုပဲ
ဦးတင်အောင် ချမ်းသာလို့လားဗျ။ ကျနော့်အထင်တော့ သူက ချမ်းသာတဲ့ စားနိုင်သောက်နိုင်လောက်ပဲ ထင်တယ်။
တို့လင်မယားကိုလည်း ချန်မထားနဲ့ဟေ့၊ ငါ့ယောက်ျားက အိတ်ခ်ျအာအီးအိုင်ဘီမှာ မန်နေဂျာဟဲ့၊ အနှစ်နှစ်အလလ ဘုန်းထားတာတွေ တော်တော် စုမိနေပြီ၊ ငါလည်း အင်လန်း ဆိုပြီး ပြည်တွင်းလုပ်ငန်း လုပ်တဲ့သူတွေလို ကားစီး။ တိုက်ဆောက်ချင်လို့ တလန်းထဲ လန်းတော့မှာမို့ ဘယ်လောက်ထောမလဲ စောင့်သာကြည့်ပေတော့ဟေ့
ကျေးဇူးပါဗျာ...အခုမှ အင်ဖော်မေးရှင်းပေးတော့တယ်။ စောစောကပေးရင် အက် လိုက်ပါတယ်။ ရှိရင်ထပ်ပေးနော်..အားမနာနဲ့...နောက်ထပ်လာမှာပေါ့.. ကျနော်လည်း အမြတ်ရလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်.. အရင်းထဲကတောင်ပါသွားပြီ..ကျနော့်အနောက်မှာ (လူ့ဘောင်သစ်) အစား (ဖြစ်သည်) ထည့်လိုက်ရပြီ။ အားလုံးကိုလေးစာပါတယ်။ ငါးလျှော်ပါ့မယ်။
ဆရာ မောင်စူးစမ်း ရဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းဆွေ...
ဗိုလ်သိန်းစိန် ဘိန်းဖြူမှောင်ခိုမှု့ မှာ ပါဝင်ပက်သက...